Kindle Paperwhite sy Kindle Kids vaovao, filohan'i Amazon amin'ity fianjerana ity | Ireo mpamaky rehetra
Kindle Paperwhite sy Kindle Kids vaovao, filohan'i Amazon amin'ity fararano ity
Joaquin Garcia | | Amazon Kindle, mpamaky
Amazon dia namoaka ny fitaovany mamaky vaovao omaly tolakandro saingy amin'ny fomba ofisialy kokoa ankehitriny Azontsika atao izao ny mahita ny toetra sy ny rakitra ao amin'ny New Kindle Paperwhite sy Kindle Paperwhite Signature Edition.
Fa ho fanampin'izay Amazon dia nahagaga fahagagana vaovao izay tsy nanananay tamin'ny tsaho ofisialy, iray amin'izany ny ny faritra Kindle ankizy izay mandrafitra ireo fitaovana Amazon marobe mikendry ny sehatry ny famakian-jaza indrindra.
Amin'ity tranga ity dia manana ny Fandoroana fototra miaraka amin'ny endri-javatra ary fampifanarahana ho an'ny ankizy antsoina hoe Kindle Kids izay ananantsika koa Kindle Paperwhite Kids inona no mitovy fa miaraka amin'ilay fitaovana vaovao Kindle Paperwhite ary avy eo manana serivisy famandrihana ihany koa izahay amin'ny fomban'ny Kindle Unlimited izay hahafahan'ny kely indrindra amin'ny trano mamaky boky sy boky amin'ny endrika nomerika.
Mazava ho azy fa manavao ny maodelin'ny Kindle Paperwhite i Amazon saingy tsy manao izany amin'ireo maodely hafa, ary mamela azy ireo mandritra ny fotoana fohy ny Basic Kindle sy ny Kindle Oasis.
Ny famoahana izay natao roa andro lasa izay tao amin'ny tranokala Amazon Canada dia efa tanteraka saingy misy ireo singa izay tsy fantatsika fa androany dia afaka mifanaraka sy manambara ihany isika amin'ny farany. Ny famaranana ny bateria sy ny tsy misy tariby dia faratampony ary koa, mba tsy hisy ny olana amin'ny famandrihana, Amazon dia nampiditra seranana usb-c, mamela ny seranan-tsambo nentim-paharazana. Izany amin'ny fampiharana dia mety hanelingelina toy tsy afaka hampiasa ilay charger ereader taloha izahay fa tsy maintsy mividy iray hafa isika. Na izany aza, ny fonosana ereader misy fonony dia misy koa ny charger, ka rehefa tonga any Espana izy ireo, toa ny Amazon Spain mampiditra ny charger ao amin'ny fitaovanao.
El Fanontana sonia Paperwhite Kindle kaonty ahoana no nampahafantaran'izy ireo anay miaraka amin'ny famandrihana tsy misy tariby plus port USB-c. Amin'ity tranga ity dia misy fonosana fonosana koa, miampy ereader miampy charger tsy misy tariby izay mitentina 239 $.
Ankoatra izany, Amazon dia nanova ny politikany momba ny tontolo iainana amin'ity famotsorana ity, milaza mazava fa ireo fitaovana dia namboarina tamin'ny singa namboarina, miaraka amin'ny fonosana tsara ho an'ny tontolo iainana ary miaraka amin'ny fotoana ahafahana mamerina mamerina na manome fiainana faharoa an'ilay mpamaky taloha raha te hanakalo azy amin'ilay Kindle Paperwhite vaovao ianao.
Ny Kindle Kids dia mihatsara tokoa mba hahafahan'ny ankizy mamaky
Fa ny tena nahasarika ny saiko ary tsy isalasalana fa ho famporisihana lehibe ho an'ny tontolo iainana Kindle dia ny fijerena ireo ankizy kely.
Amazon dia nanao doka sy nanatsara ny serivisy ho an'ny ankizy manana Kindle Kids izay miasa toa ny Kindle Unlimited fa miaraka boky ho an'ny ankizy. Ho fanampin'izany, ny fitaovana dia manana kinova rindrambaiko manokana ahafahan'ny ray na ny reny mametra ny fampiasana ilay fitaovana, manondro ny fotoana ijanonan'ny fitaovana miasa mba hametrahan'ny zanany fandaharam-potoana, mametra famakiana sasany na manova ny sensor sensor.
Miaraka amin'ireo kinova ireo sy ny maodely vaovao dia miseho ny andiana fonony miaraka amin'ny antony manosika ny ankizy sy ny tanora izay mameno ny mpamaky ary azo vidiana misaraka nefa koa miaraka, ao anatin'izany ny charger usb-c.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy amidy izy ireo satria mbola tsy an'ny firenena rehetra. Ny vidin'ny maodely mahazatra dia $ 139, ilay maodely Ny sonia Kindle Paperwhite dia $ 159 ary ny maodely Kindle Kids miaraka amin'ny fonony tsirairay avy dia $ 159 ary $ 109 ho an'ny maodelin'ny Paperwhite sy Kindle Basic.
Amazon dia mandao ny fifandraisana 4G sy ny doka?
Kindle Kids dia zava-baovao, fa raha mpampiasa nahafantatra an'i Amazon tamin'ny Kindle voalohany ianao ary mitsidika ny tranonkala, dia ho tohina ianao satria Amazon dia manasongadina sy manasongadina ny fividianana amin'ny kinova Kindle Paperwhite tsy misy doka, hatrizay dia tsy mbola toy izany. Na dia marina aza fa tsy dia be ny tsy fitoviana ary tsy manelingelina ny dokam-barotra, dia tsy mijanona manintona ny saina izany.
Ankoatra izany, ity kinova Kindle Paperwhite ity dia tsy hanana kinova 4G, izany hoe, mila fifandraisana tsy misy tariby foana isika afaka misintona ebook, vaovao na mividy. Na dia marina aza fa endri-javatra mahasoa an'i Amazon izy io, dia marina koa izany io asa io dia tena lafo amin'ny orinasa Ary raha tsy mampiasa azy io ny mpanjifa, amin'ny farany dia manjary mitarika ny orinasa. Mety izany no antony tato anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nisafidy ny hanafoana an'io endri-javatra io i Amazon ary tsy hampihatra izany amin'ny fitaovana vaovao.
Mbola tsy fantatsika ny daty mety hividianana any Espana, na dia eo amin'ny tsenan'i Etazonia aza ho azo amin'ny 28 Oktobra Saingy aorian'ny fandefasana haingana aorian'ny famoahana dia heveriko fa tsy ho ela intsony ity fitaovana ity eo amin'ny tsena Espaniola, izay na eo aza ny fisian'ny takelaka, dia mbola fitaovana tsara ho an'ny famakiana sy ny fialamboly mandritra ny ora maro. Tsy mieritreritra ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Kindle Paperwhite sy Kindle Kids vaovao, filohan'i Amazon amin'ity fararano ity
Kobo Libra 2, voadona teo amin'ny latabatra eo afovoany [Fandinihana]
Kindle Paperwhite Signature Edition, mpamaky vaovao mamoaka tsy nahy